Wasiirka Howlaha Guud oo ka hadlay ahmiyadda dhismiyaasha tayada leh – Radio Muqdisho
Wasiirka Howlaha Guud oo ka hadlay ahmiyadda dhismiyaasha tayada leh
Iyadoo dhowaan dowlada Federaalka Soomaalia ay sheegtay in ay dhiiragelin u sameyn doonto shirakadaha dhismaha ka shaqeeya oo ay leeyihiin muwaadiniinta Soomaaliyed in ay dhisaan dhismooyin tayo leh si looga maarmo shirkadaha ajaanibta ah ee ka howlgala dalka ayaa maanta Wasiirka Wasaarada Howlah guud iyo dib u dhiska dalka Mudane Salaad Sheekh Cismaan iyo Wasiirka Ku xigeenka Wasaaraddaasi Mudane Maxamed Cumar Geedi ayaa kormeer ku sameeyen qeybaha ay ka kooban tahay shirkada Kulmiye General services oo ah shirkad ka shaqeysa dhismaha.
Intii ay kormeerka ku jireen Wasiirka Wasaarada Howla guud iyo dib u dhiska dalka iyo mas’uuliyiinta shirkadaasi ayaa waxa ay booqasho ku tageen nawaaxiga Dekadii hore Ceel Macaan ee gobalka Sheebalaha Dhaxe halkaasi oo ay ka socotay mashruuc lagu soo saaraayo qalabka dhismaha si dhismooyinka ay la dhisto ay u noqdaan kuwa tayo leh.
Kormeerka kadib waxaa warbaahinta la hadlay Cabdiqaadir Abuukar Cumar oo ah maamulaha shirkada Kulmiye General Services isagoo sheegay in shaqo muhiim u ah dalka ay halkan ka hayaan.
Wasiirka Wasaarada Howlaha guud iyo dib u dhiska dalka ee xukuuma Federaalka Soomaalia Mudane Salaad Sheekh Cismaan ayaa sheegay in wasaarada Howlaha guud ay diyaar u tahay sidii ay u soo dhaweyn laheyd shirkad kasto oo ka shaqeyneysa dib u dhiska iyo bilicda dalka Soomaaliya.
Wadanka Soomaaliya ayaa waxaa uu kasoo kabsanaaya dhowr iyo labaatan sano oo burburka ku jiray iyadoo sanadihii ugu dambeeyay ay soo badanayeen shirkadaha ka shaqeeya howlaha dhismiyaasha si ay uga qeybqaatan dib u dhiska dalka.
Aayaha Gobolka Hiiraan oo laga hadlay
Xubnaha Wasiirada ee maantay tagay Kismaayo oo kulamo la yeeshay mas’uuliyiinta Jubaland